Ismiidaamin ka dhacday duleedka Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ismiidaamin ka dhacday duleedka Muqdisho
Ismiidaamin ka dhacday duleedka Muqdisho
Qarax Gaari oo Ismiidaamin ahaa ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Barta Kontorool ee degaanka Siinka-dheer, sida ay inoo sheegeen Hay’adaha ammaanka Dowladda Federaalka.
Qaraxan oo si weyn looga maqlay agagaarka uu ka dhacay ayaa waxa uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ah, inkastoo khasaaraha rasmiga ah weli aanan la sheegin.
Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka oo ka baxay Muqdisho ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, waxayna halkaasi ka wadaan baaritaano, sidoo kale waxay xaqiijinayaan ammaanka.
Saraakiil ka tirsan Hay’adaha ammaanka ayaa Idaacadda Radio baydhabo u sheegay in Ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxan, waxayna saraakiishu sheegeen inuu kooban yahay khasaaraha qaraxan uu geystay.
Dhinaca kale ururka Al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxan, waxayna tilmaameen in qaraxaasi ay ku dileen in ka badan 10 Askari oo ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka.